Wubetumi Anya Ahenni Nhyira no Bi
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | April 1, 2001
KENKAN WƆ Albanian Arabic Armenian (West) Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Ga German Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Malayalam Moore Myanmar Norwegian Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Rarotongan Romanian Samoan Sepedi Seychelles Creole Shona Silozi Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Thai Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Zulu
NÁ Kristoni ɔsomafo Paulo tumi ka ne bere so kasa atitiriw bi yiye. Ná wasua ade adu baabi a yebetumi de atoto nnɛyi sukuupɔn ho. Ná ɔwɔ hokwan a Roma man ba biara wɔ no bi. (Asomafo no Nnwuma 21:37-40; 22:3, 28) Ná adanse ahorow yi betumi ama wanya ne ho na wagye din. Nanso ɔkae sɛ: “Nneɛma a anka ɛyɛ me mfaso no, Kristo nti mibuu no adehwere . . . na mibu no sɛ sumina so ade, na Kristo ayɛ me mfaso.” (Filipifo 3:7, 8) Dɛn nti na Paulo kaa asɛm a ɛte saa?
Obi a na kan no wɔfrɛ no Saul a ofi Tarso, ne nea ɔtaa wɔn a wɔyɛ ‘gyidi kwan no mufo’ no, Paulo bɛyɛɛ gyidini bere a onyaa Yesu a wɔanyan no afi awufo mu ahyɛ no anuonyam no ho anisoadehu no. (Asomafo no Nnwuma 9:1-19) Paulo fam no, osuahu a onyae wɔ Damasko kwan so no maa ohui ampa sɛ Yesu ne Mesia, anaa Kristo a wɔhyɛɛ ne ho bɔ sɛ daakye obedi Ahenni a wɔahyɛ ho bɔ no so no. Afei nso ɛde nsakrae soronko baa Paulo asetram, sɛnea asɛm a ɔkaa no pen wɔ atifi hɔ no di ho adanse no. Ɔkwan foforo so no, esiane sɛ na Paulo wɔ koma pa nti, ɔsakraa n’adwene.—Galatifo 1:13-16.
Wɔ Bible mu no, wɔtaa kyerɛ adeyɛ asɛm “sakra w’adwene” ase fi Hela asɛmfua a nea ɛkyerɛ ankasa ne “biribi a woahu,” na ɛnyɛ “biribi a wunim dedaw” mu. Enti adwensakra kyerɛ nsakrae a ɛba obi nsusuwii, ne suban, anaa n’atirimpɔw mu, gyae a obi gyae ne kan nneyɛe esiane sɛ enye nti. (Asomafo no Nnwuma 3:19; Adiyisɛm 2:5) Wɔ Paulo fam no, wamma asɛm a esii wɔ Damasko kwan mu no anyɛ nkate mu adeyɛ anaa nea wɔfrɛ no honhom mu osuahu ara kwa. Ne fam no, na ɛyɛ hu a na ɛrema wahu sɛ na mfaso biara nni ne kan abrabɔ, a na onnim Kristo no so. Afei nso ohui sɛ nea ɛbɛyɛ na wanya ne nimdeɛ foforo a ɛfa Kristo ho no so mfaso no, ɛsɛ sɛ ɔyɛ biribi de siesie n’asetra kwan.—Romafo 2:4; Efesofo 4:24.
Nsakrae a Ɛde Nhyira Bae
Paulo nyaa Onyankopɔn ho nimdeɛ fã titiriw no ara fii Farisifo fekuw a na ɔyɛ emuni no mu mfiase no. Ná nyansapɛ ne atetesɛm pii ka wɔn gyidi no ho. Esiane ɔsom afoforo ho adwemmɔne nti, Paulo amfa ne nsiyɛ ne ne mmɔdenbɔ no anyɛ ade pa. Ɛwom sɛ na osusuw sɛ ɔresom Onyankopɔn de, nanso na ɔreko tia no ankasa.—Filipifo 3:5, 6.
Bere a Paulo nyaa Kristo ne dwuma a odi wɔ Onyankopɔn atirimpɔw mu ho nimdeɛ no, obehui sɛ ɛsɛ sɛ osi gyinae: So ɛsɛ sɛ ɔkɔ so yɛ Farisini na okura ne dibea ne nidi a ɔwɔ no mu, anaasɛ ɔnsakra n’asetra kwan na ɔnyɛ nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ biara a ɛbɛma wasɔ Onyankopɔn ani? Anigyesɛm ne sɛ Paulo sii gyinae pa, efisɛ ɔkae sɛ: “M’ani nwu asɛmpa no ho, efisɛ ɛyɛ Onyankopɔn tumi a ɛde kɔ nkwagye mu ma wɔn a wogye di nyinaa, Yudafo kan ne Helafo nso.” (Romafo 1:16) Paulo bɛyɛɛ obi a ɔde nsi ka Kristo ne Ahenni no ho asɛmpa.
Mfe pii akyi no, Paulo ka kyerɛɛ ne mfɛfo Kristofo sɛ: “Minsusuw sɛ me nsa anya aka biribi; nanso ade biako pɛ na meyɛ: mema me werɛ fi akyiri de, na metwe me mu mepɛ anim de. Mede mmirika mepɛ botae no ho madu, na makonya ɔsoro frɛ a Onyankopɔn nam Kristo Yesu mu afrɛ me no mu nkonimbo no.” (Filipifo 3:13, 14) Paulo nyaa mfaso fii asɛmpa no mu efisɛ ofi ne pɛ mu gyaee nea na ɛretwe no afi Onyankopɔn ho no mu, na ofi koma nyinaa mu dii botae horow a ɛne Onyankopɔn atirimpɔw hyia no akyi.
Ebia wotee Ahenni ho asɛmpa no nkyɛe koraa. So w’ani gye anidaso a ɛne sɛ wobɛtra ase daa wɔ paradise a ɛyɛ pɛ mu no ho? Ɛsɛ sɛ ɛba saa, efisɛ yɛn nyinaa fi awosu mu pɛ sɛ yɛtra ase wɔ asomdwoe ne ahobammɔ mu. Bible ka sɛ Onyankopɔn de “bere a enni awiei” ahyɛ yɛn komam. (Ɔsɛnkafo 3:11, NW) Enti ɛyɛ ne kwan so sɛ yɛbɛhwɛ bere a nnipa betumi atra ase wɔ asomdwoe mu wɔ anigye mu no kwan. Na ɛno na Ahenni ho asɛmpa no ka.
Nanso nea ɛbɛyɛ na woahu saa anidaso no yiye no, ehia sɛ wohwehwɛ na wuhu nea asɛmpa no kyerɛ ankasa. Ɔsomafo Paulo tuu fo sɛ: ‘Monsɔ nea Onyankopɔn pɛ a eye, na ɛsɔ ani, na ɛyɛ pɛ no nhwɛ.’ (Romafo 12:2) Enti te sɛ Paulo no, bere a woanya nimdeɛ ne ntease awie no, ɛsɛ sɛ wusi gyinae.
Nanso, ebia na wowɔ wo daakye ho gyidi bi dedaw. Kae sɛ na Saul wɔ n’ankasa adwene wɔ Onyankopɔn apɛde ho ansa na ɔrebɛyɛ ɔsomafo Paulo no. Nanso sɛ anka wobɛhwɛ kwan sɛ Onyankopɔn bɛma wo anisoadehu anwonwakwan so no, dɛn nti na wunsusuw asɛm no ho yiye? Bisa wo ho sɛ: ‘So minim Onyankopɔn apɛde ma nnipa ne asase? Adanse bɛn na mewɔ a mede begyina nea migye di no akyi? Sɛ wogyina Onyankopɔn Asɛm, Bible so hwehwɛ m’adanse no mu a, so ebegyina?’ Sɛ wofa saa kwan yi so hwehwɛ wo som mu gyidi ahorow mu a, ɛrensɛe hwee. Nokwarem no, ɛsɛ sɛ woyɛ saa efisɛ Bible hyɛ yɛn nkuran sɛ: “Monsɔ ade nyinaa nhwɛ, na munso nea eye no mu.” (1 Tesalonikafo 5:21) Sɛ biribiara da nkyɛn a, so ɛnyɛ nea ehia ara ne sɛ Onyankopɔn ani bɛsɔ yɛn?—Yohane 17:3; 1 Timoteo 2:3, 4.
Nyamesom akannifo betumi de daakye a enni awiei ahyɛ yɛn bɔ. Nanso sɛ saa bɔhyɛ no nnyina Bible nkyerɛkyerɛ so a, ɛremmoa yɛn mma yennya Onyankopɔn Ahenni mu nhyira no. Wɔ Yesu Bepɔw so Asɛnka a agye din mu no, ɔkaa no pen sɛ: “Ɛnyɛ obiara a ose me sɛ Awurade, Awurade no na ɔbɛkɔ ɔsoro ahenni mu, na nea ɔyɛ m’agya a ɔwɔ soro no apɛde no.”—Mateo 7:21.
Hyɛ sɛnea Yesu sii N’agya apɛdeyɛ so dua sɛ ade a wogyina so nya Onyankopɔn Ahenni mu nhyira no nsow. Ɔkwan foforo so no, ɛnyɛ ade a ebia ɛteɛ wɔ nnipa ani so no na ɛsɔ Onyankopɔn ani. Nokwarem no, Yesu kɔɔ so kae sɛ: “Ɛda no, nnipa pii bɛka akyerɛ me sɛ: Awurade, Awurade, yɛmfaa wo din nhyɛɛ nkɔm, na yɛmfaa wo din ntuu ahonhommɔne, na yɛmfaa wo din nyɛɛ ahoɔdenne pii anaa? Ɛno na mɛpaem maka makyerɛ wɔn sɛ: Minhuu mo da, mumfi me so nkɔ, mo a moyɛ nea ɛnteɛ!” (Mateo 7:22, 23) Ɛda adi pefee sɛ, nea ehia ankasa ne sɛ yɛbɛhwɛ ahu sɛ yɛte nea Ahenni ho asɛmpa no kyerɛ ankasa ase, na yɛyɛ ade ma ɛne no hyia.—Mateo 7:24, 25.
Mmoa Wɔ Hɔ
Yehowa Adansefo fi bɛboro mfirihyia 100 ni na aka Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpa no. Wɔnam nhoma ne wɔn anom nsɛm so reboa nnipa a wɔwɔ wiase nyinaa ma wɔanya nea Ahenni no yɛ ho nokware nimdeɛ, nhyira a ɛde bɛba, ne nea ɛsɛ sɛ obi yɛ na ama wanya nhyira horow a ɛte saa no bi.
Yɛhyɛ wo nkuran sɛ tie asɛm a Yehowa Adansefo reka no. Ɛdenam asɛmpa no a wubegye atom na wode abɔ wo bra so no, wubetumi anya nhyira a ɛso nni mprempren ne daakye nyinaa, bere a Onyankopɔn Ahenni di asase nyinaa so no.—1 Timoteo 4:8.
Yɛ ho biribi mprempren, efisɛ Onyankopɔn Ahenni mu nhyira horow no abɛn!
Yehowa Adansefo nam nhoma ne wɔn anom asɛm so reka Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpa no
Share Share Wubetumi Anya Ahenni Nhyira no Bi
w01 4/1 kr. 5-7
Ahenni Ho Asɛmpa No Ɛyɛ Dɛn?
India—“Biakoyɛ Wɔ Ɔman a Nneɛma Gu Ahorow Mu”
‘Yehowa Asɛm No Kɔɔ So Nyinii’
Nokware Kristosom Di Nkonim!
So Wote Nka sɛ Wɔnte Wo Ase?
Na Yɛyɛ Nneɛma Bom
Osetie So Ɛyɛ Ade a Ɛho Hia sɛ Wosua no Mmofraase?
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM April 1, 2001
Share Share ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM April 1, 2001
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM April 1, 2001